Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Sakafo
Oktobra 2018 14 Lahatsoratra
Jona 2018 4 Lahatsoratra
Aogositra 2017 8 Lahatsoratra
Jolay 2017 12 Lahatsoratra
Avrily 2017 3 Lahatsoratra
Avrily 2016 6 Lahatsoratra
Aogositra 2015 4 Lahatsoratra
Desambra 2012 5 Lahatsoratra
Avrily 2011 2 Lahatsoratra
Oktobra 2008 3 Lahatsoratra
Avrily 2008 8 Lahatsoratra
Janoary 2008 4 Lahatsoratra
Pejy 3 amin_ny 37
Tantara mikasika ny Sakafo
20 Janoary 2019
Mahatezitra ireo Malaoita ny Hevitry ny Bilaogera Iray momba ny “Nsima”
Mpanoratra Victor Kaonga · Afrika Mainty
Niteraka adihevitra momba ny halehiben'ny fahafahana mety hananan'ny olona amin'ny fanehoany hevitra anaty bilaogy ny lahatsoratra iray momba ny "nsima", foto-tsakafon'i Malawi. Nasehon'ireo fanehoankevitra sasany fa ilaina ihany ny famerana ny tena, ny fandraisana andraikitra ary ny fahatsapan-tena, indrindra raha manoratra momba an-javatra iray raisin'ny hafa ho sarobidy aminy ianao.
04 Janoary 2019
Tantaran'ny mpinamana mamahana sakafo maraina mpianatra zazavavy 500 isan'andro ao Yemen mba hahafahan'ireo mianatra
Mpanoratra Elisa Marvena · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Talohan'ny nisian'ny tetikasa dia tsy tonga nianatra ny ampahadimin'ny mpianatra, ankehitriny ry zareo niverina an-dakilasy avokoa.
13 Desambra 2018
Fampidirana anatin'ny Tolon'ny Bilaogy Somaliana
Mpanoratra Abdurahman Warsame · Afrika Mainty
Fehiny voalohany amin'ny bilaogy Somaliana ity, sampana kely anatin'ny tontolon'ny bilaogy Afrikana kanefa mitombo hatrany. Araka ny mety efa ho nampoizina dia tanora ny ankamaroan'ireo bilaogera Somaliana, mipetraka ivelan'i Somalia ary manoratra amin'ny teny Anglisy.
05 Desambra 2018
Vietnam: Tolokevitra Ara-tsakafo ao Hue
Mpanoratra Preetam Rai · Azia Atsinanana
Mitsidika an'i Hue, ilay renivohitr'i Vietnam taloha, i Vietnamese God amin'izao fotoana izao. Manana sary vitsivitsy momba ny sakafo any an-toerana sy tolokevitra mikasika ny trano fisakafoana ilay bilaogera.
Singapaoro: Diwali ao ‘Little India’
Mitsidika ny faritr'i Little India ao Singapaoro i Sparklette mba hijerena ireo lanonana Deepawali.
26 Novambra 2018
Sahara Andrefana: Adihevitra mikasika ny sarintanin'i McDonald
Mpanoratra Jillian C. York · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Niatrika adihevitra ny sampan'ny McDonald Maraokana tamin'ny herinandro lasa taorian'ny namoahany kilalaon'ankizy "Happy Meal" izay ahitana sarintanin'i Maraoka. Ny sisintany eo amin'ny sarintany dia manasaraka an'i Sahara Andrefana amin'i Maraoka; Faritany ifandiran'i Maraoka sy ny Front Polisario tohanan'ny Alzeriana i Sahara Andrefana.
15 Novambra 2018
Sary avy any Tahiti: Tsenan'i Papeete
Mpanoratra Alice Backer · Oseania
Mamoaka sarin'ny tsenan'i Papeete ilay blaogera sady mpampianatra ao an-toerana, Jean-Marc
Mibilaogy momba an'i India: akoranafo bio, manga, akondro, “chick-lit” sy Bollywood
Mpanoratra Kamla Bhatt · Azia Atsimo
Manana endriny samihafa amin'ny fanoratana momba an'i India amin'ity herinandro ity izahay. Anisan'ireo lohahevitra noresahana ny: bio-carburants, chick-lit (tantaram-pitiavana), manga, akondro, Madras ary Bollywood.
14 Novambra 2018
Miatrika olana ara-tontolo iainana ny reniranon'i Litani ao Libanona, renirano lehibe indrindra ao amin'ny firenena
Mpanoratra Christophe Maroun · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Nampiseho ny fikarohan'ny Oniversite Amerikanina ao Beirota fa ny rano nalaina tao Litani nandritra ireo volana fahavaratra maina kokoa dia rano maloto avokoa. Hita fa feno singa-metaly mivangongo be ireo legioma voatondraka tamin'ny rano maloton'ny renirano, izay mety hisy fiantraikany amin'ny hoza-doha ary manakorontana ny fiasan'ny fo sy ny voa.
29 Oktobra 2018
Japana: Noana Ao Amin'ny Tany Tondra-dronono
Mpanoratra Chris Salzberg · Azia Atsinanana
Nanainga ny blaogera japoney maro hieritreritra mikasika ny fiantraikan'ny politikan'ny fiahiana ara-tsosialy ao amin'ny fireneny ny tantara vao haingana mikasika ny lehilahy iray matin'ny hanoanana [Ja] noho ny tsy nahazoany ny fanampiana ara-tsosialy, izay lasa nalaza noho ny niraketany tao anaty diary ny andro farany niainany. Vakio ato ny sasany...